Angel Di Maria oo si weyn u difaacay kabtanka xulka Argantina ee Lionel Messi – Gool FM
Angel Di Maria oo si weyn u difaacay kabtanka xulka Argantina ee Lionel Messi
(Brazil) 29 Juunyo 2019. Xiddiga kooxda Paris Saint – Germain ee Angel Di Maria ayaa ka hadlay qaab ciyaareedka Lionel Messi ee tartanka Copa America 2019, kaasoo ilaa iyo haatan sameynin qaab ciyaareedkiisii fiicnaa.
Messi ayaa ilaa iyo haatan ka dhaliyay tartanka Copa America 2019 1 gool oo kaliya, wuxuuna ahaa kulankoodii labaad ay wareega Group-yada kula ciyaareen Paraguay.
Angel Di Maria oo lahadlayay saxaafada kaddib guushii ay xalay kaga gaareen xulka qaranka Venezuela wareega siddeed dhamaadka Copa America 2019 ayaa wuxuu yiri:
“Waxaan la qabsanay inaan aragno Messi oo dhalinaya goolal, laakiin waxaan qabaa in uu qabanayo shaqo fiican, wuu shaqeenayaa oo hadana shaqeenayaa, wuxuu sidaas u ogyahay in ka badan qof kasta ee kale”.
“Kulamada noocaan oo kale waxaad ku qasban tahay kaliya inaad orodo, kaddibna aad ka fikirto waxyaabaha kale, sida inaad ciyaarto iyo inaad gool dhaliso”.
Si kastaba ha ahaatee, xulalka Brazil iyo Argentina ayaa waxay SuperClásico ku wada ciyaari doonaan wareega afar dhamaadka ee tartanka Copa America 2019, Arbacada soo aadan taariikhdana ay ku beegan tahay 3-da July, garoonka Belo Horizonte.
Xulalka Cameroon iyo Ghana oo barbaro ku kala baxay kulan ka tirsan Koobka Qarammada Afrika 2019... + SAWIRRO